Ukubuyekezwa kweFirefox 3, amaRobhothi, ama-Add-ons namaTweaks | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 20, i-2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Usuku lwesibili nge I-Mozilla Firefox 3 futhi sengivele ngiyisusile iSafari ethekwini lami. Isiphequluli sishesha impela (ngiqagela kuze kube yi-my izengezo ezidumile futhi kufika izibuyekezo ezimbalwa zokuphepha). Ngikholwa ukuthi kufanelekile ukuthuthuka futhi ngiyakwazi ukulinda izinsuku ezimbalwa kuze izengezo zisheshe.
Ukuthuthukiswa kokusebenziseka kuvuliwe the Ukuhlelwa Kwenkinobho
Ushintsho oluphawuleka kakhulu lapho uqala i-FF3 yinkinobho enkulu emuva ebha yamathuluzi. I-Kudos ethimbeni lesibonisi kulolu shintsho. Izakhiwo ezijwayelekile zezinhlelo zemenyu kuzinhlelo zokusebenza zibeka ukubaluleka ngesikhundla, kepha abaklami beMozilla banqume ukuyithathela elinye igxathu ngokukhulisa inkinobho yokubuyela emuva. Lolu ushintsho olukhulu… abasebenzisi banamathuba amaningi okusebenzisa le nkinobho ukwedlula zonke ezinye; ngenxa yalokhu, ubukhulu nokuma kwazo kungukuthuthuka okuhle.
Amanye amaTweaks kuFirefox 3
Uma uthayipha mayelana: i-config kubha ye-url kuFirefox 3, unokufinyelela okuthile kuzilungiselelo ezithile ezimnandi - futhi eziyingozi. Nazi izintandokazi zami engivele ngiziguqule:
general.WarnOnAboutConfig - uma ungasithandi isexwayiso lapho uvula mayelana.config, chofoza kabili lokhu ukuvula isexwayiso FALSE.
isiphequluli.urlbar.autoFill - chofoza kabili ku-TRUE futhi ama-URL akho azoqedela ngokuzenzakalela ngokuya ngomlando wakho.
isiphequluli.urlbar.doubleClickSelectsAll - chofoza kabili ku-TRUE futhi uma uchofoza kabili kubha yakho ye-url, izokhetha yonke i-URL kunokuba isinqamu sayo.
jikelele.smoothScroll - chofoza kabili ku-TRUE bese iskrola amakhasi kusiphequluli sakho kahle.
ukwakheka.spellCheckDefault - setha lokhu kube ngu-2 futhi ungapela ukuhlola yonke imikhakha, hhayi nje izindawo zombhalo!
Amaqanda e-Easter: Umlayezo ovela kumaRobhothi
Uhlobo mayelana: amarobhothi kubha ye-url ukuhleka okukhulu! Kuhle ukubona onjiniyela abanamancoko. Ngifisa sengathi izinhlelo eziningi zingangeza amaqanda ama-Easter kanjena.
mayelana: mozilla elinye iqanda (ngicabanga ukuthi bekunguqulo ngayinye).
Isengezo esisodwa angikwazi ukukwenza ngaphandle
I-Delicious Bookmark Add-on imane nje iyamangalisa. Uma usagcina amabhukumaka esipheqululini sakho, YIMA! UDel.icio.us ukuvumela ukuthi wabelane ngezixhumanisi, uzihlele, uzimake, futhi uzithumele kubhulogi yakho.
Isici engifisa ukuthi singabuyekezwa
Ngiyasithanda isici esiku-Internet Explorer esifaka umbala ohlaza okotshani we-url kumasayithi aphephile. Ngifisa sengathi ngabe kukhona mayelana: i-config ukubekela lokho.
Tags: adobebounceizinga lokunciphisagajsi-algorithm yokusesha ye-googleumphathi we-google tagukukhishwaukubikaumagazineukumaka
UJun 20, 2008 ngo-7: 38 AM
I-Re: green URL bar - I-FF3 inengxenye yombala oluhlaza we-URL lapho uvakashela amasayithi athile. Ngaphezu kwalokho, esikhundleni se-favicon ebonakala ngakwesobunxele, igama lenkampani liyavela futhi (womabili avela ngemuva okuluhlaza).
Ngicabanga ukuthi ihlobene nesitifiketi sokuphepha ngoba lapho uhambisa igundane lakho endaweni enethunzi uthola ithuliphu yamathuluzi ethi “Verified by: Verisign, Inc.”
UJun 20, 2008 ngo-9: 06 AM
Hm. Ngikuthanda kakhulu ukubukeka kwezinkinobho zakho, kepha izinkinobho zami ze-FF3 azibukeki zinjalo. Ingabe leso isikhumba mhlawumbe?
UJun 20, 2008 ngo-10: 34 AM
Azikho izikhumba, uMichelle. Futhi umshini wami weWindows ubukeka ngendlela efanayo.
UJun 20, 2008 ngo-9: 23 AM
UMichelle - inkinobho ebekelwe i-mac ibonakala ihluke kakhulu kunangesikhathi usebenzisa i-FF3 ku-pc. Kungenzeka yini ukuthi umehluko lowo?
UJun 20, 2008 ngo-9: 29 AM
Ngisebenzisa namabhukhimakhi amnandi futhi, ikakhulukazi njengendlela yokwabelana ngamabhukhimakhi phakathi kwamakhompyutha. Ngibe sengisebenzisa igama elingukhiye lohlobo ngalunye lwebhukumaka elino- “ff:” ngaphambili. Ngakho-ke, wonke amabhukumaka wami wezezimali amakwe ku- “ff: ezezimali” futhi kungenzeka amakwe njengokufihliwe. Ngingabe sengimaka lelo thegi njengentandokazi, ngakho-ke liyabonakala kubha yamathuluzi Emnandi nakumenyu.
Jun 20, 2008 ku-12: 44 PM
Ngisebenzisa okumnandi, kepha iSocialMarker (http://www.socialmarker.com) futhi inenkinobho esikuvumela ukuthi uyilondoloze kumasayithi angama-30 ahlukene wokubhukimakhi komphakathi.
Kuyasiza ukusabalalisa okuthunyelwe kwebhulogi. 🙂
Jul 3, 2008 ngo-12: 08 PM
Bengilokhu ngisebenzisa i-FireFox 3 kusukela ku-beta 3 noma i-4, futhi ngivele ngabona ukuthi ibha yendawo isebenzisa ukusesha okugcwele kombhalo kwesihloko ne-URL yawo wonke amakhasi kumlando wakho. Yize kuthatha umzuzwana noma emibili ukusesha yonke leyo datha, lesi yisici esihle sokusebenziseka engangingenandaba naso ekuqaleni, kepha manje ngiyasithanda.